जलिस्को विशिष्ट पोशाक, मेक्सिकन पहिचानको गुण | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 12/05/2021 09:19 | संस्कृति, मेक्सिको
जलिस्कोको विशिष्ट पोशाकको विशिष्ट कपडासँग धेरै समानताहरू छन् मारियाचिस, यस बिन्दुमा तिनीहरू प्रायः अलमल्ल हुन्छन्। वास्तवमा यो विश्वास गरिन्छ कि उत्तरार्द्धहरू जलिस्को शहरमा जन्मेका थिए कोकुला। यद्यपि तिनीहरू वास्तवमा उस्तै छैनन्। ती मध्ये दोस्रो प्यान्ट र ज्याकेटमा बटनहरू समाहित गर्दछ, रंगको अधिक विविधता हुनुको साथै।
यद्यपि प्रामाणिक ठेठ जैलिसको पोशाक, जुन यो लेखले ओगटेको छ, अधिक शान्त छ। जसको नामले स As्केत गर्दछ, हामी तपाईंलाई यस मेक्सिकन राज्यको क्लासिक कपडाको बारेमा बताउन गइरहेका छौं, जुन देशको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ र तिनीहरूको सीमानामा छ। Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y कोमामासाथै प्रशान्त महासागरको साथ।
1 जलिस्कोको विशिष्ट पोशाकको विशिष्टता
1.1 सूटको ईतिहास
1.2 जालिस्को विशिष्ट पोशाक महिलाहरूको लागि
1.3 पुरुषहरूको लागि जलिस्को पोशाक
2 जब जलिस्कोको सामान्य पोशाक प्रयोग गरिन्छ
2.1 Charro दिन
जलिस्कोको विशिष्ट पोशाकको विशिष्टता
हामी यो कपडाको सन्दर्भमा ईतिहासको थोरै गरेर सुरू गर्नेछौं र त्यसपछि विशिष्ट पुरुष र महिला पोशाकमा केन्द्रित हुनेछौं। ती दुबै फरक छन्, धेरै अधिक रंगीन र हंसमुख ती महिलाहरुको।
को उत्पत्ति चारो सूट, जुन, तपाईंले पहिल्यै कटौती गरिसक्नु भएको जस्तो, जालिस्कोको परम्परागत हो, १ XNUMX औं शताब्दीको हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मेक्सिकोलाई विदेशमा पहिचान गर्ने लुगाको जन्म भएको हो, विश्वास गरिएको छ, स्पेनी मुलुकहरूमा विशेष गरी सलामान्का.
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, यस प्रान्तका बासिन्दाहरूलाई बोलाइएको छ, ठीक, charros। र, यदि तपाइँ तिनीहरूको विशिष्ट कपडाहरू हेर्नुहुन्छ, यो सत्य छ कि तिनीहरू जैलिस्को पोशाक जस्तै हुन्। स्पानियार्डमा कडा कालो प्यान्ट, समान रंगको छोटो ज्याकेट, र उच्च सवारी जूत्ताहरू समावेश छन्। साथै, टोपी समान छ, यद्यपि धेरै सानो पखेटा संग।
जलिस्कोको सामान्य पोशाकसहित चेरोहरू
यो कपडा अमेरिका मा हिस्पानिक्स को आगमन संग पास भएको थियो र मा अपनाइने थियो जलिस्को क्षेत्र। यद्यपि यसले धेरै परिमार्जनहरू प्राप्त गर्यो। निम्न शताब्दीहरूमा, यसलाई थपेर सुधार गरियो असंख्य हस्तनिर्मित कढ़ाई र गहनाहरू। पहिले नै XIX मा, यो एक द्वारा प्रयोग गरिएको थियो चीनाकोस, क्षेत्र मा काम गर्ने पुरुषलाई दिइएको नाम।
एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई भन्छौं कि सम्राट हेब्सबर्गको म्याक्सिमिलियन उहाँ चारो सूटको महान प्रशंसक हुनुहुन्थ्यो। उसले आफ्नो नयाँ राष्ट्रलाई अनुकूल बनाउन को लागी धेरै चोटि यो प्रयोग गरे। पहिले नै मेक्सिकन क्रान्ति संग, यो कपडा बन लोकप्रिय बने Quintessential मेक्सिकन पोशाक, देशका अन्य क्षेत्रहरूको विशिष्टलाई पार गर्दै (यदि तपाईं पछिल्लो बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं) यो लेख).
यद्यपि, हाल सबै विशिष्ट क्यारो कपडाहरू एकै हुँदैनन्। तिनीहरू फरक छन् काम लुगा, पूर्ण पोशाक र पूरा पोशाक, यद्यपि त्यहाँ दुबै बीच कुनै फरक छ। केवल एक मा बस्ने कढ़ाई र गहना को लक्जरी कि तिनीहरू समावेश छन्। तपाईंले अनुमान गर्नुभएजस्तै पूर्वहरू उत्तरवर्ती भन्दा बढी शान्त हुन्छन्, यद्यपि ती सबै अति राम्रा र उल्लेखनीय छन्।
यदि तपाईं राजधानी, र जलिस्कोको राज्यको सबैभन्दा लोकप्रिय शहर ग्वाडलाजारा भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो विशिष्ट पोशाक पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदैन। तार्किक रूपमा, यसका बासिन्दाहरूले यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दैनन्, तर तिनीहरू गर्छन् तिनीहरूले कुनै पनि घटनाको पोशाकको फाइदा लिन्छन्। तर, थप विज्ञापन बिना हामी हामी तपाईंलाई महिलाहरुका लागि सामान्य जलिस्कोको पोशाकको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
जालिस्को विशिष्ट पोशाक महिलाहरूको लागि
जलिस्को विशिष्ट महिला पोशाक
जलिस्को महिलाले लामो स्कर्टको साथ एक-टुक्रा पोशाक लगाउँछिन्। यो संग बनेको छ पपलिन, यसको घाँटी अग्लो छ र यसको आस्तीनहरू ब्यागी प्रकारका छन्। यसको माथिल्लो भागमा, छातीको उचाईमा, यसले बोक्दछ केहि vee आकार को बलहरु त्यो ओभरल्याप साथै स्कर्ट एकदम फराकिलो छ।
रंगको सन्दर्भमा, यो प्राय: हुन्छ एकल टोनयद्यपि यो प्रसन्नताको साथ भिन्नता छ रंग टेपहरू यो ओभरल्यापिpping र फीता संग कि यो गहना को रूप मा लगाउँछ। फुटवेयरका लागि, यो लेसबाट बनेको हुन्छ र यसमा विभिन्न सामानहरू छन्। अन्तमा, कपालको हेड्रेस कपडामा देखा पर्नेहरू जस्तै समान रिबनको साथ बनेको हुन्छ।
पुरुषहरूको लागि जलिस्को पोशाक
पुरुषहरूको लागि चारो सूटको सन्दर्भमा, यो यसको माथिल्लो भागमा, शर्टको हुन्छ, जसमा ए छोटो ज्याकेट। यो वक्षको तल्लो भागमा पुग्छ र यसको आस्तीनहरू समान रूपमा छोटो छ चाँदीको गहना पुतलीको। त्यस्तै, यो संग सजिलो गर्न सकिन्छ सत्तरी बटन उही टोनको, यद्यपि तिनीहरू सुनौलो पनि हुन सक्दछन्।
प्यान्टको लागि, तिनीहरू तंग, साबर वा कपडा र गाढा टोनहरू छन्। तिनीहरूले पनि बोक्छन् सबै खुट्टा संग ट्रिम। लुगा सूटको रूपमा समान रंगको फीता-अप जुत्तासँग पूरक छ।
विशेष उल्लेख हुनु पर्छ sombrero। यो मूल रूपमा जलिस्को सूर्यको प्रभावहरूको प्रतिरोध गर्न र घोडाबाट खसेको बिरूद्ध संरक्षणको लागि डिजाइन गरिएको हो। यस कारणले गर्दा, तिनीहरू खरानी कपाल, ऊन लगाएको वा गहुँको परालले बनेका थिए र उनीहरूको सिसामा चारवटा ढु stones्गा वा रिबन थिए जसले त्यसलाई दोब्बर बनायो र यसलाई अझ प्रतिरोधी बनायो।
यस सामान्य टोपीको बोट ठूलो र फराकिलो पनि छ, साथै स्वराङ्कित यसको पछाडि अन्तमा, कहिलेकाँही यसले सजिलो हुन्छ शाल वा कढ़ाई ट्रिमहरू। क्षेत्र कार्यका लागि यो डिजाइन यति उपयोगी थियो कि यो मेक्सिकोभरि नै विशिष्ट भयो।
अन्तमा, अर्को टुक्रा जुन Charro शैलीमा हराउन सक्दैन त्यो हो serape। यस अवस्थामा, यो लुगा होइन, तर कम्बलको एक प्रकार हो जुन सवारहरूले उनीहरूको घोडाको काठीसहित बोकेका थिए। तसर्थ, तपाईं यो देख्नुहुने छैन जब तपाईं नाच वा पैदल मा पैराडमा भाग लिनुहुनेछ, तर तपाईं यसलाई देख्नुहुनेछ जब यो घुंघराउँ पासहरू वा आउँदछ। चारो कार्यक्रमहरू कि हामी तपाइँलाई अर्को देखाउन जाँदैछौं।
जब जलिस्कोको सामान्य पोशाक प्रयोग गरिन्छ
वास्तवमा, एकचोटि हामीले पुरुष र महिलाहरूको लागि जैलिसको पोशाक कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गरिसकेपछि, हामी तपाईंलाई यसमा कुरा गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्नेछौं घटनाहरू र उत्सवहरू जहाँ उनीहरूमा लगाइएका व्यक्तिहरू भेट्टाउन अझ सामान्य हुन्छ।
शो बरो उत्कृष्टता जहाँ यी पोशाकहरू लगाउँदछन् ती हुन् charrería। एज़्टेक देशका परम्परागत घुड़सवार कार्यक्रमहरूले यो नाम लिन्छन्। तिनीहरू भनिन्छ क्षेत्र मा विकसित चारो क्यानभ्यासहरू र तिनीहरू मिलेर सवारहरूले आफ्ना घोडाहरूको पछाडि बिभिन्न व्यायामहरू गर्छन्।
एउटा खेलको रूपमा, यो २० औं शताब्दीको सुरुमा खेतमा गाईवस्तुको रोजगारको सम्झना गर्नको लागि जन्मिएको थियो जुन अप्रचलित हुँदै गइरहेको थियो। Charrería एक संघ द्वारा मेक्सिको मा आयोजित छ र यसको परम्परा को रूप मा मान्यता प्राप्त छ मानवता को अमूर्त विरासत युनेस्को द्वारा उनीहरूको संरक्षण गर्न।
हाल, महिलाहरू पनि Char Charíía मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। मात्र होइन किनभने प्रत्येक वर्ष एक छनौट गरिएको छ Reina त्यो विभिन्न उत्सवहरूको उद्घाटनको लागि जिम्मेवार छ, तर किनभने घुड़सवार प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्छ। तिनीहरू अमेजन हुन् जो सबै भन्दा माथि, अनुशासनमा भाग लिन्छन् चरा झडप। यसमा आठ अमेजनका समूहहरू छन् जसले उनीहरूको घोडाको पछाडि र संगीतको तालमा कोरियोग्राफिकहरू प्रदर्शन गर्छन्।
तर, भाग्यवस, अधिक र अधिक क्यारालाई अन्य प्रकारको कार्यक्रमको अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये, हामी तपाईंलाई उल्लेख गर्नेछौं घोडा कोव, गोरु र घोडा सवार, क्यानभासमा पाइअल्स, पैदल वा घोडामा स mang्गीत, म ,्गलीमा सर्टलिस्ट वा मृत्युको चरण.
तार्किक रूपमा, यी केसहरूमा महिलाहरूले तिनीहरूको सूटको लागि अन्य प्रकारका सामानहरू लगाउँदछन्। ती मध्ये, स्पर्स, टोपी र स्टाफ सहितको जुत्ता। थप रूपमा, उनीहरूले घोडामा विशेष माउन्ट भनिन्छ प्याक्सैडल.
Charros मृत्यु को पारित प्रतिनिधित्व
Charrería मेक्सिकोको परम्परामा यति एकताबद्ध छ कि हरेक सेप्टेम्बर १ 14 एज़्टेक देशले मनाउँछ Charro दिन। यसको क्षेत्रको वरिपरि (यदि तपाईं यस बारे मा लेख पढ्न चाहानुहुन्छ) वेराक्रुज़, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) अश्वारोहण र सांगीतिक कार्यक्रमहरू यसको स्मरणार्थ मनाइन्छन्। पछिल्लो सन्दर्भमा, मारियाची तिनीहरू पूर्ण पात्रहरू हुन्।
जलिस्कोको राज्यको बारेमा जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौं, त्यो मितिमा ग्वाडालजाराले मनाउँछ मारियाची र Charrería को अन्तर्राष्ट्रिय बैठक। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, राजधानी को सडक सजिलो छ र हजारौं पुरुष र महिलाहरू ठेक्का जलिस्को वेशभूषा पहिरन र पारम्परिक संगीतको व्याख्या गरेर तिनीहरूमा हिंड्छन्।
घटनाहरू मुख्यतया मा केन्द्रित छन् लिबरेशन स्क्वायर, जहाँ असंख्य चाडहरू छन्। तर त्यहाँ परेड, gala प्रदर्शनहरू पनि छन् घाँटी काटिएको थिएटर र जनसमूह पनि यसमा गाए Zapopán को Basilica.
लोक समूहले संगीत विधालाई प्रदर्शन गर्दछ जस्तै तापातियो सिरप, "मैक्सिकन टोपी" को रूपमा पनि चिनिन्छ भुँइमा छोडियो र यसको वरिपरि नाचनुभयो। यो एउटा विवाहपूर्व नृत्य हो जसको उत्पत्ति हामीले मेक्सिको क्रान्तिमा खोज्नुपर्दछ।
त्यस्तै प्रकारका उत्सवहरूमा समान रूपमा धेरै लोकप्रिय छन् क्युलेब्रा, एक नृत्य कि फिल्ड मा काम को पुन: निर्माण, इगुआना र घोच्ने घोडा, अनुवाद गर्दा अन्य नृत्यहरू बीचमा सुन्ने मारीआचिस आवाज। यो गीतहरूको नाम हो जुन चाररिसाको नाचहरू र कार्यक्रमहरूको साथ हो र यसैले, जलिस्कोको विशिष्ट पोशाकसँग नजिकबाट जोडिएको छ।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई यस बारे बतायौं जलिस्कोको विशिष्ट पोशाक दुबै पुरुष र महिलाका लागि। तर हामीले तपाईंलाई मेक्सिकोको चेरेरियाको विश्वको महत्त्व पनि वर्णन गरेका छौं, जसमा यो कपडा र मारियाची ध्वनी पनि समावेश छ। यी सबैले एक संस्कृति कन्फिगर गरेको छ जुन एजेटेक देशको सिमाना पार गरीरहेको छ विश्वभरि लोकप्रिय हुन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » विशिष्ट जलिस्को पोशाक